शाइन रेसुंगाको नाफा किन खस्कियो ? खुद नाफा ११.८२% तल झर्दा अरु के–के भयो ?
काठमाडौं : शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ११.८२% ले खुद नाफा घटेको वित्तीय विवरण प्रकासित गरेको छ । गत वर्ष २६ करोड ९० लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको यस बैंकले अहिले २३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा कमाउन सफल भएको छ ।
यस्तै, शाइनको खुद ब्याज आम्दानी पनि गत वर्षको भन्दा ६.२४% ले घटेर ४६ करोड ९७ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा ओर्लिएको छ । गत वर्ष ५० करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । सञ्चालन नाफा पनि ४१ करोड ५० लाखबाट घटेर ३५ करोड १ लाख २ हजार रुपैयाँमा ओर्लिएको छ ।
ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामै गिरावट आउँदा समग्र नाफामा असर गरेको देखिन्छ ।
निक्षेप ९ अर्ब २६ करोडबाट बढाएर १२ अर्ब ८५ करोड ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको शाइनले ११ अर्ब ४६ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । चुक्ता पुँजी पनि १ अर्ब १० करोडबाट वृद्धि गरी १ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन बैंक सफल भएको छ ।
गत वर्षको कमाईबाट साइनले २५% बोनस सेयर दिएको छ । बोनसपछि चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख १५ हजार पुगेको हो । शाइनको रिजर्भ कोषमा ५० करोड ६३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ । रिजर्भ कोष बढाउनुपर्ने चुनौती यो बैंकलाई पनि देखिन्छ ।
यता, खराब कर्जामा भने सुधार आएको छ । गत वर्ष ०.२६% रहेको खराब कर्जा यो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ०.१६% मै सीमित भएको छ । सम्भावित जोखिमका लागि ४ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ छुट्याएको शाइनले १ करोड ८८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राइट ब्याक गर्न सफल भएको छ ।
कस्ट अफ फन्ड ८.०७% र कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.७५% छ । गत वर्ष कस्ट अफ फन्ड ५.४८% र कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.३४% थियो । प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ९४ पैसा (वार्षिक) रहेको शाइनको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने १३६ रुपैयाँ ७३ पैसा छ ।